ASA MENDRIKA HO AN’NY REHETRA : Nomarihina omaly ny faha-100 taonan’ny OIT
Iray amin’ireo firenena manaja ny zon’ny mpiasa i Madagasikara satria mpikambana feno ao amin’ny sampan-draharaha iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT. 12 avril 2019
Nomarihina tetsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, omaly, ny fankalazana ny faha-100 taonan’ity sampan-draharaha ity. Tsy diso anjara tamin’ny fanamarihana izany ny OIT eto Madagasikara satria dia notronin’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian mihitsy ny lanonana.
Tamin’ny taona 1960 i Madagasikara no niditra tao anatin’ity sampan-draharaha ity raha tsiahivina ary ny taona 1975 no nipetraka voalohany teto Madagasikara ny Biraon’ny sampan-draharaha momba ny asa na ny BIT. Efa nisy fotoana ihany koa nitantanan’ny Praiminisitra Ntsay Christian ny Bit talohan’ny naha praiminisitra azy.
Mbola ambany ny tahan’ny olona manana asa mendrika eto Madagasikara satria dia latsaky ny 6 isan-jato izany, hoy ny praiminisitra Ntsay Christian. Mbola maro, hoy izy ny fanamby tsy maintsy hotratrarin’ny fitondram-panjakana ka mila mifanome tanana ny rehetra amin’ny fanohanana ny vinan’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina satria ny vina izay napetrany dia vina hampananana asa mendrika ny isam-batan’olona. Nambarany ihany koa fa ny fanovàna an’i Madagasikara dia mifototra amin’ny fananganana fotodrafitrasa maro hampananan’asa ny tanora. Asa izay tsara tsipihina fa hamaly ny filan’ny tanora ankehitriny.
Ankoatra izay dia hisy ihany koa ny fametrahana ireo toeram-panofanana manara-penitra hoforonina manokana ho an’ny tanora ahafahana mamaly ny filana arakasa eto amin’ny firenena.
Nambaran’ny talen’ny birao iraisam-pirenena momba ny asa eto Madagasikara fa efa betsaka ny tombotsoa azon’ireo mpiasa maneran-tany tao amin’ny OIT ary tsy diso anjara tamin’izany i Madagasikara. Ho an’i Madagasikara manokana dia nambaran’ny OIT fa antony maromaro no mbola azo heverina ho fototry ny tsy fisitrahana asa mendrika teo aloha ka isan’izany ny fatahorana ho very asa. Nohazavainy fa matahotra ny tsy hahita asa ny mpiasa aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana tahaka an’i Madagasikara ka manaiky fifanarahana arakasa izay tsy mifanaraka amin’ny faripahaizany ny karama raisina.
Eo ihany koa ny fanaovana asa tsy mifanaraka amin’ny lalam-piofanana narahina na ny fianarana noratovina. Manampy trotraka ireo ihany koa ny mari-karama izay mbola ambany dia ambany eto Madagasikara. Mbola sakana amin’ny fananana asa mendrika ao amin’ny firenena iray ihany koa ny fampanjakana ny mira lenta eo amin’ny sehatr’asa iray raha ny nambaran’ity talen’ny birao iraisam-pirenena momba ny asa eto Madagasikara ity hatrany.
Efa misy ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fanomezana asa mendrika ho an’ny Malagasy, hoy ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta ary heni-kaja, heni-boninahitra tokoa i Madagasikara nandritra ity fankalazana ity satria tsy diso anjara tamin’ireo firenena 24 nampitana mivantana ny zava-misy eo amin’ny fanomezana asa mendrika nataon’ny OIT.